Villa Borghese ကိုဖြတ်ပြီးလမ်းလျှောက် | ခရီးသွားသတင်း
ရိုးမား တစ်နှစ်ပတ်လုံးလှပသည်။ သို့သော်၎င်း၏ဆွဲဆောင်မှုများစွာသည်အပြင်ဘက်တွင်ရှိပြီးနွေ ဦး ရာသီသို့မဟုတ်ဆောင်း ဦး ရာသီသည်အပြည့်အဝပျော်မွေ့ရန်အကောင်းဆုံးရာသီဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ဒီဆောင်းရာသီပြီးတဲ့နောက်ရောမမြို့ကိုသွားပြီးလမ်းတစ်လျှောက်လျှောက်လှမ်းရမဲ့အကြောင်း ဗီလာ Borghese?
ပန်းခြံ၊ ဥယျာဉ်၊ စမ်းရေတွင်းများ၊ ရေကန်များ၊ မတူကွဲပြားသောစတိုင်များ၏အဆောက်အ ဦး များ၊ ပြတိုက်များနှင့်အခြားဆွဲဆောင်မှုများကိုသင်ဤရောမမြို့၏ထောင့်တွင်တွေ့နိုင်သည်။
1 ဗီလာ Borghese
2 Villa Borghese မှာဘာလည်ပတ်ရမလဲ
ပစ္စုပ္ပန်သည်သစ်တောပြန်လည်သစ်တောများကိုပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာနှင့်ကပ်လျက်တည်ရှိပြီး ၁၇ ရာစုအစောပိုင်းတွင်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးပေါလ် ၅ ၏တူနှင့်ပန်းပုဆရာ Bernini ၏နာယကလက်အောက်တွင် Cardinal Borghese ၏လက်အောက်တွင် shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်စတင်ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ အတော်များများကကျော်ကြားအနုပညာရှင်တွေစီမံကိန်းအပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့် 1633 ခုနှစ်တွင် villa အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။
၁၈ ရာစု၏ဒုတိယပိုင်းတစ်ဝက်တွင် Noble House ဟုခေါ်သည့်ယနေ့ခေတ် Borghese ပြခန်းနှင့် Carlo Bilotti ပြတိုက်ရှိ Water Games House တို့ပြီးစီးခဲ့သည်။ ရေကန်ဥယျာဉ်သည်လည်းပုံဖော်ခဲ့သည်
ရာစုနှစ်နှစ်ခုကြာပြီးနောက်မြို့၏အရွယ်အစားမှာကြီးထွားလာပြီးနောက်ဆုံးတွင်တစ်မြို့လုံးသည် ပုံမှန်အင်္ဂလိပ်ဥယျာဉ်တော်။ ၂၀ ရာစုအစတွင်အမြဲတမ်းကြွယ်ဝသော Borhese မိသားစုသည်မိမိတို့၏ကံကြမ္မာကိုတုန်လှုပ်ချောက်ချားစေပြီးမြေယာနှင့်၎င်း၏အဖိုးတန်သောအရာများအားနိုင်ငံတော်သို့ရောင်းချရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ကောင်းတယ်
အဆိုပါပန်းခြံကိုနှလုံးကဲ့သို့ပုံဖော်ထားသည်အကယ်၍ သင်သည်ကောင်းကင်မှကြည့်လျှင် ၎င်းသည်လခများဖြစ်သော Piazzale Flaminio နှင့် Porta Pinciana အကြားဖြစ်သည်။ သား 80 ဟက်တာ နှစ်နာရီခန့်လမ်းလျှောက်လျှင်သင်လည်ပတ်နိုင်သည့်အလှအပများကို သမိုင်းဝင်အဆောက်အအုံများ၊ ပြင်ပအဆောက်အအုံများ၊ ပြတိုက်များ၊ အထိမ်းအမှတ်ပစ္စည်းများ၊ စမ်းရေတွင်းများ၊ ရေကန်များ၊ ဥယျာဉ်များနှင့်ရေကန်များ။
Villa Borghese သို့သွားရောက်ရန်အတွက်လက်တွေ့ကျသောသတင်းအချက်အလက်များ
Termini မှ metro line A ကိုယူပြီး Flaminio တွင်ဆင်းပါ။ သငျသညျမီတာ 500 ခန့်လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်သင် villa မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။ ဘတ်စ်ကား ၈၈၊ ၄၉၀၊ ၄၉၅၊ ၁၆၀၊ ၉၁၀၊ ၅၂၊ ၅၃၊ ၆၂၈၊ ၉၂၆၊ နှင့်အတူတူပင်လမ်းရထား 88, 490 နှင့် 495 ဖြစ်ပါတယ်။
၀ င်ခွင့်သည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးသင်ကြည့်ချင်သောပြတိုက်များသို့မဟုတ်အဆောက်အ ဦး များအတွက်သာပေးချေသည်။
Villa Borghese မှာဘာလည်ပတ်ရမလဲ
La Borghese ပြခန်း အနုပညာပြတိုက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကလွဲလို့မရဘူး ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးပြတိုက်။ စုဆောင်းမှုကို ၁၅၇၆ မှ ၁၆၃၃ ခုနှစ်အတွင်း၌ Paul V ၏တူ Cardinal Borghese မှစတင်ခဲ့သည်။ Berniniသူသည်သူ၏ပထမဆုံးနာယကဖြစ်ခဲ့ပြီးတန်ဖိုးရှိသောစုဆောင်းမှုလည်းဖြစ်သည် Caravaggio ။
အဆောက်အ ဦး မှာအထပ်နှစ်ထပ်ရှိသည်။ အဓိကကြမ်းပြင်အားလုံးရှိသည် ဂန္ရှေးဟောင်းပစ္စည်း အေဒီ ၁ မှ ၃ ရာစုအတွင်းအံ့ဖွယ်ကောင်းသောထိန်းသိမ်းထားသည့်ပန်းပုများ၊ အပေါ်ထပ်တွင်ပြခန်းများကလက်မှတ်ရေးထိုးထားသောအလုပ်များရှိသည် Rubens, Bottticelli, Raphael နှင့် Titian.
အ Canova နှင့် Bernini မှပန်းပုများ သူတို့ကဒီမှာရှိအဲဒီမှာပုလဲဖြစ်ကြသည်။ နေ့ချင်းညချင်းအလျင်စလိုမသွားဘူး သင်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းရမည် ကောင်းပြီ, many ည့်သည်အများအပြားရှိပါတယ်။ ကြိုတင်မှာကြားထားမှုကိုအွန်လိုင်း (သို့) ဖုန်းဖြင့်ကြိုတင်ရက်ပေါင်းများစွာကြိုတင်မှာယူနိုင်သည်။ Borghese ပြခန်းကိုအင်္ဂါနေ့မှတနင်္ဂနွေမနက် ၈း၃၀ မှည ၇း၃၀ အထိဖွင့်လှစ်သည် ၁၅ ယူရိုကုန်ကျတယ်.
၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သောအကြောင်းအရာများအပြင်အဆောက်အ ဦး ကိုယ်တိုင်ကပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ရှုထိုက်သည်။ ၎င်းကိုဗိသုကာပညာရှင် Flaminio Ponzio က Cardinal ၏ဆင်ခြေဖုံးရွာတစ်ရွာအဖြစ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ သူသေဆုံးချိန်တွင် Vasanzio က ဆက်လက်၍ မူရင်းဒီဇိုင်းကိုအလှဆင်ခြင်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဥယျာဉ်၊ ငှက်ကုလားအုတ်များဖြင့်လှပသောအပန်းဖြေနေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။
သင်မြင်နိုင်သောအခြားအဆောက်အ ဦး များမှာဥပမာအားဖြင့် Meridiana၊ Casino del Graziano, Casino dell'Orologio, Casino Nobile သို့မဟုတ် Portezzuola ။ ၎င်းတို့သည်သမိုင်းဝင်အဆောက်အအုံများဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့သည် Casa Giustiniani၊ Pajareríaသို့မဟုတ် Solar Clock အား၎င်း၏လျှို့ဝှက်ဥယျာဉ်များနှင့်ပေါင်းထည့်နိုင်သည်။
မှန်ပါတယ်၊ ဒီအဆောက်အ ဦး တွေမှာကိုယ်ပိုင်ဥယျာဉ်လေးများရှိသည်။ သူတို့တွင်အထက်ပါတို့ဖြစ်ကြသည် လျှို့ဝှက်ဥယျာဉ်များဒါပေမယ့်လည်း Scanpad Borghese ၏ Plazoleta ဥယျာဉ်၊ သို့မဟုတ်လှပသော ရေကန်ဥယျာဉ် ၎င်း၏လှပသော colonnaded Aesculapius ဘုရားကျောင်းနှင့်အတူ။ ၎င်းအဆောက်အအုံသည် Orocio, Casa del Reloj သို့မဟုတ် La Prqueña Fortaleza ကဲ့သို့သော neoclassical နှင့် ၁၉ ရာစုရှိအဆောက်အ ဦး များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
သူတို့တက်လာသည် အမျိုးမျိုးသောသတင်းရင်းမြစ် Fontana dei Cavalli Marini၊ Fontana del Fiocco၊ Dark Fountain (သို့) Fontana dei Pupazzi တို့လိုမျိုးဖြစ်သည်။ Museo Canonica လည်းရှိသည်။ ၎င်းသည် Pietro Canonica ၏အနုပညာရှင်၊ အနုပညာရှင်၊ Casa de las Rosas သို့မဟုတ် Casa del Cine ဖြစ်သည်။ သင်ကလေးများနှင့်အတူသွားလျှင် Raffaello အိမ်၊ ၎င်း၏ကလေးကစားကွင်းနှင့်သင်တိရိစ္ဆာန်များကိုကြိုက်နှစ်သက်လျှင်၎င်းသည်သွားနိုင်သည် ရောမတိရစ္ဆာန်ရုံသို့မဟုတ် Bioparco 200 ကွဲပြားခြားနားသောမျိုးစိတ်တစ်ထောင်ထက်ပိုသောတိရိစ္ဆာန်များနှင့်အတူ။ ၎င်းသည် ၁၉၁၁ ခုနှစ်တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီးအီတလီ၌အကြီးဆုံးနှင့်အသက်အကြီးဆုံးတိရစ္ဆာန်ရုံတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်မှစပြီးတစ်နှစ်ပတ်လုံး၊ တစ်ရက်လျှင်ခုနစ်ရက်ဖွင့်သည်။ ဝင်ကြေးလူကြီးတစ် ဦး လျှင် 25 ယူရိုကုန်ကျသည်။ သင်အွန်လိုင်းလက်မှတ်များ ၀ ယ်နိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အရှိဆုံးသက်ဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုနောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်သည် Pincio ရေနာရီXNUMX ရာစုအင်ဂျင်နီယာတစ် ဦး အံ့။ ခြင်း။
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် ရေအားလျှပ်စစ်နာရီ အဲဒီမှာတည်ဆောက်ခဲ့သည် 1867 လက်ပတ်နာရီပြုလုပ်ခြင်းကိုနှစ်သက်သောဒိုမီနီကန်ဘုန်းတော်ကြီး Giambattista Embriaco နှင့်ဆွစ်ဗိသုကာ Joarchim Ersoch တို့ကပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အံ့ thing စရာကောင်းသည် နေဆဲအပြည့်အဝစစ်ဆင်ရေး၌တည်၏ ၁၈၆၇ ခုနှစ်တွင်ပါရီရှိနာမည်ကြီး Universal Exposition တွင်ပြသခဲ့သည်။
သင်လည်းတွေ့လိမ့်မည် လန်ဒန်ရှိရှိတ်စပီးယား၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြဇာတ်ရုံ၏ပုံတူ, Silvano Toti ကမ္ဘာလုံးပြဇာတ်ရုံ, အဲလစ်ဇဘက်ခေတ်မှကြီးမားသောမြို့ပတ်ရထားတဲ၊ ဘုရားကျောင်းများနှင့်ပြခန်းများ၊ ရင်ပြင်များနှင့်စမ်းရေတွင်းများ။ ပြီးတော့သိသာထင်ရှားတဲ့အချက်ကတော့ခရီးစဉ်ရဲ့အထင်ကရနေရာဟာ Pincio ဥယျာဉ်ဖြစ်ရမယ်လို့ပါ။ ဒီကနေသင်ရောမမြို့ကိုလှပတဲ့ရှုခင်းတွေမြင်တွေ့ရပြီ။
Villa Borghese တွင် Via Pinciana, Raimondi, Aldrovandi, Piazzale San Paolo del Brasile၊ Piazzale Flaminio နှင့် Piazzale Cervantes တို့အကြားဝင်ပေါက်ကိုးခုရှိသည်ကိုသတိရပါ။ လှည့်ပတ်ပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » မြို့ကြီးများ » ရိုးမား » ဗီလာ Borghese မှတဆင့်လမ်းလျှောက်